In Your Eyes (2014) | Peace site
July 17, 2021 peacesite7410	Leaveacomment
အကယ်၍သာ လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ဟာ တွေ့ဆုံဖို့ ကံပါလာပြီးသားဆိုရင် ရှောင်လွှဲလို့ရနိုင်ပါ့မလား……….
ပူပြင်းခြောက်သွေ့ပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံကြီးရဲ့ တဖက်စွန်းမှာ အကျယ်ချုပ်နဲ့ အလုပ်တွေလုပ် ပြန်ပေးဆပ်နေတဲ့ Dylan ဆိုတဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ အချိန်ပြည့်အေးစက် နေမထွက် နှင်းကျနေတတ်တဲ့ တခြားတစ်ဖက်က အထိီးကျန် အိမ်ထောင်သည်မလေး Rebecca တို့ဟာ တွေ့ဆုံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိပဲ ဘယ်လိုဆုံတွေ့ကြမလဲ….
ဒါလေးကတော့ ဒီဇာတ်ကားရဲ့ သော့ချက်ပါပဲ ဒီလူနှစ်ယောက်ဟာ ငယ်စဉ်ကတည်းက တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မသိကြပဲ အမြင်တွေ ခံစားချက်တွေဟာ နှစ်ကိုယ့်တစ်စိတ်လို ဖြစ်နေပါတယ် ဥပမာ ကောင်မလေးက နှင်းလျှောစီးလို့ နဖူးကွဲရင် ဒီဖက်က ကောင်လေးကပါ စာသင်ခန်းထဲမှာ ပြုတ်ကျလိုက်နာကျင်ရတာမျိုး… ဆိုတော့ကာ ဒီစွမ်းအားကို နှစ်ယောက်သား လူကြီးဖြစ်ခါမှ ထိန်းချုပ်တတ်ပြီး ဆုံတွေ့ကြတော့တယ် ဒါပေမဲ့လည်း တွေ့ဆုံချိန်ဟာ နောက်ကျခဲ့ပြီလား ကိုယ်စီအထီးကျန်နေကြတဲ့ဘဝမှာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ဖေးမနိုင်မလား ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေ တွေ့ကြုံရမလဲ ဘယ်လိုဖြတ်ကျော်ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းကြမလဲဆိုတာ ကြည့်ရမယ့် Romance ကားကောင်းလေးတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။
2014 ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး IMDB rating အရလည်း 7.0 ရရှိထားပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းကိုရေးသားထားတဲ့ Joss Whedon ဟာဆိုရင်လည်း Avengers 1,2ကိုရေးသားရိုက်ကူးထားတဲ့ ဒါရိုက်တာဖြစ်တာကြောင့် ဒီလိုထူးဆန်းတဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်လေး ဖြစ်လာတယ်ဆိုလည်းမမှားပါဘူး။
ထုံးစံအတိုင်း တခြား MM sub page တွေ ပြန်ထားတာမမြင်လို့ ဘာသာပြန်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ဗျ…..
( StreamSB ) ( Dubox 1080p ) ( Dubox 720p )
Previous PostObey Me!Next PostKamen Rider Decade